အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ဘင်္ဂါလိကုလားကို တိုင်ရင်းသားလုပ်ဖို့မကြိုးစာနဲ့.
DON'T PUSH BENGALI ISSUES TOO MUCH, DOESN"T WORK IN MYANMAR- သိပ်ပြီးလည်း ဘင်္ဂါလီကိစ္စကို တွန်းမတင်နဲ. မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံတကာကအဖွဲ.အစည်းတွေ နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေနဲ. ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ. အစည်းတွေဟာ မြန်မာပြည်အကြောင်း ကောင်းကောင်း သဘောမပေါက်ပဲ အခုအချိန်မှာ ဖိအားပေးပြီး တွန်းပို.လိုက်ရင် လွယ်လွယ်နဲ. အချောင်နေရာရသွားမယ်လို.ထင်ထားပုံရပါသည်။ ဒါတွေကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဖို. တပ်မတော်နဲ.အစိုးရက အလျော့ပေး လိုက်လျောနေတုန်း ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ကိစ္စကို ထိုးထည့်ကျဖို. ကြံစည်ခဲ့တာပါ။
အရင်က ပြည်ပ ဖိအားပေးမှုတွေ ထိရောက်မှု ရှိသလိုလိုဖြစ်ခဲ့တာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်လို. ယူဆရတာဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒနဲ. တသားတည်းရှိခဲ့လိုပါ။ အခုတော့ ပြည်ပ အဖွဲ.အစည်းတွေ နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေ တိုင်းတပါး NGO တွေရဲ့ ဖိအားပေး အကြပ်ကိုင်မှုတွေ ဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားနဲ. လုံးဝ ဆန်.ကျင်ဖက် ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် လူထုက ဒါမျိုးကို လက်မခံပဲ ပြတ်သားစွာ ရပ်တည်နေကြတာပါ။
ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ကိစ္စဟာ လက်ရှိအစိုးရနဲ. ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါ။ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ပြသာနာဟာ မြန်မာပြည်သူလူထုအများစုနဲ. ထိပ်တိုက်ဖြစ်နေတာမို. ဘယ်လိုနည်းနဲ.မှ ဖိအားပေး အကြပ် ကိုင်လို.မရနိုင်ပါ။ အစိုးရတခု အဖွဲ.အစည်းတခုကိုတော့ ဖိအားပေးတာ အကြပ်ကိုင်တာတွေ ထိရောက်နိုင်ပေမယ့် အခုဖြစ်နေတဲ့ မူဆလင် ဘင်္ဂါလီကိစ္စဟာ အစိုးရတခုနဲ.ဖြစ်နေတာ ခေါင်း ဆောင်တဦးနဲ.ဖြစ်နေတာ အဖွဲ.အစည်းတခုနဲ.ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပဲ မြန်မာပြည်သူလူထုအများ စုနဲ. ပြောရရင် တိုင်းပြည်တခုလုံးနဲ.ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမို. မြန်မာပြည်သူတွေနဲ. မြန်မာနိုင်ငံက ဒီကိစ္စကို ဘယ်လို လုပ်ပြီးမှ အလျော့ပေးမှာ လိုက်လျှောမှာ ပြည်ပက ဖိအားပေး အကြပ်ကိုင် မှုတွေကြောင့် ဒူးထောက်အညံ့ခံစရာ အကြောင်းမရှိပါ။
ဒီလိုအခြေအနေကို ပြည်ပအဖွဲ.အစည်းတွေ NGO တွေ နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေ သဘောပေါက် နားလည်ပုံမရပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ လူထုတရပ်လုံး ပြည်သူအများစုက ဒီကိစ္စမှာ အစိုးရနဲ. လဲ တသဘောတည်းဖြစ်နေတာမို. ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒကို ဆန်.ကျင်ပြီး ဘယ် မည်သူ မည်ဝါမှ ဒီရပ်တည်ချက်က ချော်ထွက်ရဲမှာ မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းကတော့ ဒီဟာ မြန်မာပြည် သူ အများစု၏ လိုအင်ဆန္ဒနဲ. ရပ်တည်ချက်တွေ ဖြစ်နေလို.ပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို မြန်မာပြည်သူအများစုက ကာကွယ်သွားမှာပါ။
ဒီလိုဖြစ်နေတာမို. ပြင်ပကနေ နိုင်ငံခြားအဖွဲ.အစည်းတွေ ပညာရှင်ဆိုသူတွေ လူ.အခွင့်အရေး အဖွဲ.အစည်းဟု အမည်ခံထားသူတွေအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒနဲ. ရပ်တည် ချက်ကို ဆန်.ကျင် ကျော်လွန်ပြီး ဘာကိုမှ အပေးအယူ လုပ်ဖို. ဖိအားပေး အကြပ်ကိုင်လို. မရ နိုင်ပါ။ မြန်မာပြည်ဟာ အရှေ.တီမောတို. တောင်ဆူဒန်တို.လို ကြားပွဲစား ညှိပေးလို. တိုင်းပြည် သစ်ဘ၀ကို ရရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု ကိုယ့်ဘာသာတရားနဲ. ရပ်တည်လာခဲ့သည့် နိုင်ငံတခုပါ။ ပြောရရင် အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ.ကနေဒါတို.ထက်တောင် သက်တမ်းရှည်ကြာခဲ့တဲ့နိုင်ငံပါ။
မြန်မာပြည်သူလူထု အများစုဟာ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် ရှာစားနေသူ တိုင်းတပါးသားတွေ အဖွဲ. အစည်းတွေ၏ အကူအညီနဲ. ထောက်ပံ့ကြေးနဲ. ရပ်တည်နေသူတွေ မဟုတ်ပါ။ ပြောရလျှင် ဆူနာမီတို. နာဂစ်တို. ဂီရိတို. မိုးခေါင်လို. ရေရှားလို. ဆည်တမံပေါက်ကျလို. အခု မိုးရေကြီး မြစ်ရေလျံလို. ရေလွှမ်းမိုး စတဲ့ သဘာဝ ဘေးဒုက္ခသည် အကြိမ်ကြိမ် ခံခဲ့ရတာတောင် တကယ်တော့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အချင်းချင်း မရှိရှိတာကို ဝေခြမ်းပြီး ရှိတာလေးတွေကို မျှပြီး စားခဲ့ကြသူပါ။ ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံခြားအကူအညီဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လုံ လုံလောက်လောက် မယ်မယ်ရရ ရရှိခဲ့ဘူးတာ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်ဟာ အာဖရိကတိုက်က နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ပါ။
တခုခုဖြစ်ရင် ဘယ်တိုင်းပြည် ဘယ်နိုင်ငံက အကူအညီ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ကြေညာချက် တွေ ထုတ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ လုပ် စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ပါလာတာပဲ ရှိပါသည်။ တကယ်ကယ့် လက်တွေ. အားကိုးရတာကတော့ ပြည်တွင်းက ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အချင်းချင်း ဝေမျှစားရတဲ့အကြိမ်က များပါသည်။ နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေ အလှူငွေဆိုတာ ကြားလိုက် တာပဲ ရှိပါသည်။ နောက်တော့ ဘယ်ရောက်လို. ဘယ်သူတွေ ရမှန်းတောင် မသိကြရပဲ ကိုယ့် မြန်မာပြည်သား အချင်းချင်း အရပ်ကယ်ပါ လူဝိုင်းပါနဲ.သာ ဒုက္ခ သုက္ခတွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရ တာ မဟုတ်ပါလား။ တကယ် ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေကပဲ အဓိက ကူညီပေးတာပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် နိုင်ငံခြားအဖွဲ.အစည်းတို. NGOs တို.ဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ်သေးပါ။ ပြောရရင် သြဇာမလွှမ်းမိုးနိုင်ပါ။ သိလည်း မသိကြပါ။
အရင်က နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေ ပြည်ပအဖွဲ.အစည်းတွေ NGO အဖွဲ.တွေအနေဖြင့် စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေး အကြပ်ကိုင်လို. ရကောင်းရခဲ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီတုန်းက စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်နဲ. မူဝါဒတွေကို ပြည်သူတွေက မထောက်ခံတာတွေ ရှိခဲ့သည်။ အခုကိစ္စက အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါ။ အစိုးရနဲ. ပြည်သူ။ နိုင်ငံရေးအင်အားစုနဲ.ပြည်သူတွေက တအုပ်စုဖြစ်ပြီး ပြည်ပမှာ အခြေစိုက် တဲ့ အုပ်စုတချို.နဲ. နိုင်ငံခြားအဖွဲ.အစည်းတွေ NGOတွေက တဖက်လို ဖြစ်နေတာမို. ပြည်တွင်း က ပြည်သူတွေ၏ သဘောတူ ထောက်ခံမှု မရှိပဲ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့ပြသာနာတွေကို ဘယ် အပြင်လူကမှ လာပြီး ဆရာကြီးလုပ်လို. ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းကတော့ လူထုက မထောက်ခံလို.ပါ။
ဒါကြောင့် ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်ကိစ္စဟာ အရင်က စစ်အစိုးရကို လူ.အခွင့်အရေးတို. ဒီမိုကရေစီအ ရေးတို. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေးတို. စသည်စသည့် Issues တွေနဲ. မတူပါ။ အဲဒီတုန်းက ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေက အားပေးထောက်ခံပြီး စစ်အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်တွေ အပေါ် ပြည်သူတွေက မထောက်ခံတာတွေ ရှိခဲ့တာပါ။ အခုက အဲဒီလို မဟုတ်ပဲ အစိုးရတင် မဟုတ် ပြည်သူအများစုကိုယ်တိုင်က ဒီကိစ္စလက်မခံနိုင်တာမို. ဒီလိုမျိုးပြသာနာကို ဘယ်လို လုပ်ပြီး အပြင်ကနေ အော်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားအဖွဲ.အစည်းတွေက NGOs အဖွဲ.တွေက ပြည်ပ အစိုးရတွေက မြန်မာပြည်တွေကို ဘာလုပ်ပါ ဘာလက်ခံပါလို. အမိန်.ပေး စေခိုင်းလို.ရ နိုင်မှာလည်း။ အိမ်ရှင်ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေမှာ ဘယ်လို စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ် ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ သိအောင် အရင်လေ့လာလိုက်ပါဦး။ ။
မြန်မာပြည်ဟာ မနေ.တနေ.ကမှ တိုင်းပြည်တခုအဖြစ် စတင်ပြီး ပေါ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာ မြေပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ ရာစုနှစ်တွေ ထောင်ချီပြီး ရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်တခု ဖြစ်တာမို. မြန်မာပြည်မှာ ဘာလူမျိုးတွေ ဘာတိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်သလဲဆိုတာ စာရင်းအသစ် ကောက်စရာမလိုပါ။ ဘယ်သူတွေက တိုင်းရင်းသားတွေ ဘယ်လူမျိုးတွေက ဘယ်ဒေသမှာ အခြေချနေတိုင်သူတွေ ဘာဘာသာကို ကိုးကွယ်သူတွေဆိုတာ အရင်ကတည်းက ရှိခဲ့ သိခဲ့ သမိုင်းတင်ပြီးသားပါ။ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ သန်းခေါင်းစာရင်းပဲ ကောက်ဖို. လိုတာပါ။ ဘာလူမျိုးတွေ ဘာတိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်သလဲဆိုတဲ့အချက်ဟာ မေးစရာမလို လေ့လာစရာမလို အရင်ကတည်းက တည်ရှိနေပြီးသာ သိနေပြီးသား မှတ်တမ်းတွေ ရှိနေပြီး သားပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့သမိုင်းမှာ မရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား နာမည်ကို ထပ်ထည့်စရာ အသစ် ထွင်စရာမလိုပါ။ နိုင်ငံခြား NGO တွေ နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေ နိုင်ငံခြားက အဖွဲ.အစည်းတွေသာ မသိရင်ရှိမယ် မြန်မာပြည်သား တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနေပြီးသားပါ။
ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်လို အုပ်စုမပြောနဲ. တရုတ်နဲ. ဟိန္ဒိူ အိန္ဒိယကုလားတွေမှာတောင် မြန်မာပြည် မှာ နေရာတခု အရပ်တခုမှာ စုစုစည်းစည်းနဲ. အုပ်စုလိုက် အပြုံလိုက်နဲ. အခြေချနေထိုင်တာ မျိုး မရှိပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်မှာ လူဦးရေး ၃%နှုန်းလောက်ရှိတဲ့ အဲဒီလူမျိုးတွေတောင် သူ တို.ကို တရုတ်တိုင်းရင်းသား အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားဆိုပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် တောင်းဆိုတာမျိုး ပြောဆိုတဲ့ ပြသာနာမျိုးမရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်သာ နေထိုင်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် အနှစ် ၂၀ကျော်က ခိုးဝင်လာတဲ့သူ ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင်တွေဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ.မှ အလိုလျှောက်နဲ. နိုင်ငံသားဖြစ်လို.မရပါ။ ။
နောက်တခုက ဘင်္ဂါလီတွေကို ထောက်ခံသူတွေ ပြောတာရှိပါသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားတာတွေကို ကန်.သတ်ထားသည်။ ကလေး ၂ယောက်ထက် မမွေးရလို. ပိတ်ပင်မှုတွေ မတရားလုပ်ထားသည်ဟုဆိုကြပြန်ပါသည်။ အဲဒီအဆိုတွေသာ တကယ်မှန်လျင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တအိမ်ထဲ မိသားစု တခုထဲမှာတင် လူဦးရေက ၄၀-၅၀ ရှိလာနိုင်စရာအကြောင်းဖြစ်မည်နည်း။ လက်ထပ်မှု သားသမီးယူမှုတွေ အရမ်းတင်းကြပ်ထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှုကြီး ဖြစ်နေနိုင်မည်နည်း။ ယုတ္တိယုတ္တန်ရှိအောင်လည်း လိမ်ဖို. လိုပါသည်။ တဖက်မှာ ထိမ်းချုပ်ထားတယ်လို. ဆိုပြီး တကယ်မှာတော့ လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှုကြီးက အဆမတန်ဖြစ်နေတာ အားလုံးအသိပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူတွေပြောတာ မှန်မမှန် ဆင်ခြင်လို.ရနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့် မရှိတဲ့ သမိုင်း မရှိတဲ့လူမျိုးကို အတင်း လူမျိုးအဖြစ် တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံ ခိုင်းနေခြင်းက မြန်မာအစိုးရနဲ. မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ဖိအားပေးတာ မဟုတ်ပဲ မြန်မာ့သမိုင်းတခုလုံးကို လိမ်ညာဖို. ပြောင်းပြန်လှမ်ဖို. ကျိုးစားမှုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ခက်တာက ဒီကိစ္စမှာ မြန်မာပြည်သူလူထုကိုက လက်မခံတာ ဆန်.ကျင် ကန်.ကွက်နေတာဆိုတာ သဘောပေါက်ဖို. လိုပါသည်။ ဒါကြောင့် အပြင်က လူတွေ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်တွေဟာ တကယ် လက်တွေ.ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။
ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်တွေကို ထောက်ခံအားပေးသူတွေက အတွင်းက ပြည်သူတွေမဟုတ်ပဲ ပြင်ပက တခြားနိုင်ငံကလူတွေ ဖြစ်နေတာမို. အခုလို အတင်းဖိအားပေးမှုတွေ ပိုပြီး လုပ်လေ တွန်းကန်မှုတွေက ပိုပြီး များလေ ဖြစ်စေပါမည်။ သာမာန်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးကို စိတ်မ၀င်စား မပတ်သက်တဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေတောင် ဒီလို အပြင်ကနေ ဖိအားပေး အကြပ်ကိုင်မှုတွေ များလာရင် သူတို.ပါ မခံမရပ်ဖြစ်ပြီး ပိုပြီး ဆန်.ကျင် ကန်.ကွက်တဲ့သူတွေ အားကောင်းသွား စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်စေပါသည်။
ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်တွေနောက်မှာ များများ ပြင်ပ အုပ်စုတွေ နိုင်ငံခြားအဖွဲ.အစည်းတွေ တိုင်းတပါး အစိုးရတွေက အားပေးထောက်ခံလေ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပိုပြီး စိုးရိမ်မှု ကြောင့်ကျမှုတွေ ဖြစ်စေပြီး ပိုလို.တောင် ဆန်.ကျင် ကန်.ကွက်ပြီး လက်မခံတဲ့ ခံစားချက် နာ ကျည်းချက်တွေ ဖြစ်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာပြည်မှာ အေးအေးဆေး ဆေးနေခြင်တဲ့ နိုင်ငံသားအဖြစ်ရရှိထားတဲ့ အစ္စလမ်းဘာသာဝင်တွေတောင် ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်အုပ်စုတွေကို နိုင်ငံခြားအဖွဲ.တွေက ထောက်ခံမှုဖြစ်လေ အထဲမှာ မြန်မာပြည်သူ အများစုရဲ့ ဆန်.ကျင်မှုတွေ ပိုအားကောင်းလာလေမို. သူတို.ကိုပါ ရောသွားမှာကိုတောင် စိုးရိမ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ပြည်ပက အဖွဲ.အစည်းတွေ နိုင်ငံခြား NGOs တွေရဲ့ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်ကို အားပေးမှုတွေက ပြည်တွင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေး မိရိုးဖလာနေ ထိုင်ကျတဲ့ တခြား အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်တောင် အနှောက်အယှက်တွေ ပြသာနာ တွေ တက်လာနိုင်ပါသည်။ မြင်တတ်သူတွေ သိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားအဖွဲ.အစည်းတွေက အားပေး အားမြှောက်နဲ. သွေးထိုးပေးလေ ပြည်တွင်း မှာ ပိုပြီး ဘင်္ဂါလီဆန်.ကျင်ရေးစိတ်က ပိုပြီး အားကောင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအချက်ကို နိုင်ငံခြားအဖွဲ.အစည်းတွေ ကြိုတွက်ထားပုံမရပေ။
သူတို.ထင်တာက အခုအချိန်မှာ ဖိအားပေး အကြပ်ကိုင်လိုက်ရင် မြန်မာအစိုးရအသစ်အနေ ဖြင့် အလျှော့ပေး လိုက်လျောလိမ့်မည်ဟု တွက်ပြီး ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်အကွက်ကို ရွှေ.ဖို. ကြိုး စားနေခြင်းသား ဖြစ်ပါသည်။ ။
အရင်က ဖိအားပေးလို.ရတာ ထိရောက်တာက အစိုးရကို လူထုက မထောက်ခံလို.ဖြစ်တယ်။ အခုက ဒီကိစ္စမှာ လူထုကိုယ်တိုင်က ဘင်္ဂါလီမူဆလင်တွေကို လက်မခံတဲ့အပြင် အစိုးရ၏ ရပ်တည်ချက်ကို ပြည်သူတွေက အားပေးထောက်ခံနေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ဖို. လိုပါသည်။ ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှု မရှိပဲ မရပဲ ဘာကိုမှ လုပ်လို.မရနိုင်ဖူးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ လူမှုအဖွဲ.အစည်းတွေ NGO တွေ တိုင်းတပါးအစိုးရတွေသဘော ပေါက်ဖို. လိုပါသည်။
လူဦးရေ သန်း ၂ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ နိုင်ငံကြီး ၂ခုအကြားမှာ အခုအထိ နိုင်ငံတခုအဖြစ် ရပ် တည်နိုင်ခဲ့တာကို သဘောပေါက်ဖို.လိုပါသည်။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 4:02 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook